Mateo 22 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Mateo 22 - Nkwa Asem (NA-TWI)
1Yesu de abebu ahorow kyerɛɛ sɛnea ɔsoro ɔhenni no te. 2 Ose, “Ɔsoro ahenni te sɛ ɔhene bi a ne babarima hyiaa ayeforo, na ɔtow pon maa no. 3 Ɔtoo nsa frɛɛ nnipa pii. Bere no dui no, ɔsomaa n’asomfo sɛ wɔnkɔfrɛfrɛ nnipa no na wɔmmra. Nanso nnipa no amma. 4 Ɔsan somaa n’asomfo foforo se, ‘Monkɔka nkyerɛ wɔn se, wɔawie biribiara. Wɔakum m’anantwi ne me nyɛmmoa de anoa aduan awie. Mommra ayeforo no ase, mmedidi!’
NA-TWI : Mateo 22